Butt Lifter Shapewear Vanopa uye Fekitori - China Butt Lifter Shapewear Vagadziri
2020 nyowani yekuuya panties muviri shaper musono zvisingaonekwe vakadzi sexy butt lifter panties tummy control slimming body shaper
Iyo imwe-chidimbu 3D muchiuno-kumusoro, zvinoenderana nekuumbwa kwechiuno kwechivanhu, inoputira mahudyu munzira dzakasiyana-siyana kuburikidza nezvikamu zvakasiyana zvekupfeka. Akakwiridzira zvinhu, kwete kudzorwa, hapana kumanikidzwa, hapana kutsvedza. Iwo marara ane kunyange uye akanaka mitsara, kusagadzikana kusagadzikana, uye kuoma.
2020 Kutengeswa kutsva kupisa kutakura buttocks panties tummy control butt kusimudza booty shaper pants
Chigadzirwa chakatungamira kutengesa, nyowani yepamberi mudumbu, chiuno chakabuditswa, matanda ehudyu, yakakwira chiuno muviri mudumbu matumbu, ichitaridza zveshure yevakadzi, ine rudo uye inoyevedza. Iyo dhizaini inoita kuti mucheka uve wakasimba uye ugare.
YI YUN Kupisa kutengesa yakaderera chiuno butt inosimudza panties inotakura buttocks pad kusimudza panties
Masiponji ezvipanji uye madhiri akakodzera muhudyu, akavakirwa muhomwe, mapenji esiponji anobvisa, nyore kuchenesa. Iyo yakakwira-yakakwira muhudhi yakanyanya kuwanda uye inofema, uye haizadzore kana ichinge yakarara. Chigadzirwa chisiri-mucherechedzo pachiuno pamucheto, anti-kukwenya, anti-kukunguruka.
Amazon inopisa kutengeswa uye saizi yakakwira Chiuno Bhatani Lifter Panty simba vakadzi hove chimiro zvipfeko tummy kudzora slimming muviri shaper
Kuwedzera kukura dumbu rinosimudza madhiri, yakakwirira chiuno lace maturu, akakwirisa zvishoma kukwana, kumanikidza kudzvanywa padumbu, mitsara mitatu uye mabere masere, anokwanisa kugadzirisa mudumbu. Iyo yakakwirira-yakarukwa jira, kwete yakasimba, zvinobudirira kuunganidza yakawandisa mafuta, mana masiponji mapipi kubatsira muviri wako chimiro
Kukura Vakadzi Bhatani Lifter Shape Bum Inosimudza Pants Buttocks Enhancer muhudzi padded tummy control slimming body shaper
Yakavakirwa-yakakwira-yakarukwa chipanje padanda chinoita kuti chihombodo chiuno chiwedzere kutwasanuka. Hapana-yakatsvedza machira, akapfava uye anogona kufema, bhokisi remabhokisi harisi chairo-rakapfava, iro risiri-dhizaini dhizaini yechiuno, anti-kukwenya, uye anti-kukunguruka.
Lace isina mavara muhudyu-muhudyu boxer, yakazadzwa nesiponji, yakarongedzwa muchiuno. Lace lace, izere neyechikadzi runako, sexy uye isina musono. Mairi maviri emukati magiya akachengeteka. Yakakwirira elastic yakakodzera, yakasimba uye yakasimba. Mucheka uyu wakareruka uye unofema.
Ffekita yakananga kutengesa Nyowani chigadzirwa chepamusoro mafashoni vakadzi sexy tummy control vanotakura buttocks underwear
Ichi chigadzirwa 95% machira + 5% spandex. Mucheka uyu wakapfava uye unofema, uye uri pedyo neganda. Chiuno chakakwirira chinotambanudza mudumbu, chichibora mafuta, chinosimudza matete. Ku sweta-proof uye nekutsva-proof cuffs kunoita kuti zviome kupora.
Akanakisa wholesale uye saizi Vakadzi Vakakura Waist Yekudzidzisa Tummy Kudzora Seamless Sexy Muviri Shapers Butt Lifter
Lace isina mavara muhudyu-muhudyu boxer, yakazadzwa nesiponji, yakarongedzwa muchiuno. Lace screen gauze, izere neyechikadzi runako, sexy uye isina musono. Yakakwirira elastic yakakodzera, yakasimba uye yakasimba. Imwe-chidimbu chekuumba tekinoroji, iyo mucheka wakareruka uye usinga-maka uye unofema.